Track Cell ekwentị Nchọgharị History
ExactSpy-Track Cell Phone Browsing History ndekọ nile website adreesị onye ọrụ gara na ekwentị nchọgharị. Ị ga-enwe ike ịhụ na ọ bụrụ na mmadụ na-ekiri ihe ha na-ekwesịghị ị na-elele!
ExactSpy enye gị ohere iji soro niile web akụkọ ihe mere eme site na iPhone ma ọ bụ Android Target ekwentị nchọgharị weebụ.
Lee niile na ebe nrụọrụ weebụ gara
Inwe oge na ụbọchị nke ọ bụla nleta
All URL na-uploaded online akaụntụ Dashboard; pịa ileta ọ bụla n'ime ha
Ị chọrọ na-anya na ihe na ebe nrụọrụ weebụ gị na ụmụ gị na-eleta? Eche ma ọ bụrụ ọrụ na-anọkọ na-abụghị ọrụ metụtara saịtị? Ma ọ bụ ikekwe ị nwere onye bụ onye na-ezopụ gburugburu na onye mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị. ExactSpy-Track Cell Phone Browsing History enye gị ohere iji na-ruo ụbọchị gị dum Target onye ọrụ weebụ nchọgharị omume. Lee onye ọ bụla URL uploaded n'ime gị online Dashboard, na pịa ọ bụla URL ileta ozugbo. Ọ pụtara na ihe niile URLs ọrụ mesịa na ihe nchọgharị ndị a ga-esoro na zipu ndopuyo na website ka ị na-ahụ ihe ọ bụ. N'ihi ya, i nwere ike isi nyochaa internet eme (URLs) on what devices you installed Exactspy.
Na ExactSpy ngwa, ị nwere ike inyocha web saịtị na gị na ụmụaka ma ọ bụ ọrụ na-eleta ha smartphones. Anyị software na-enyere aka inyocha ihe ọ bụla ọrụ on mobile Internet uzo nke ihe ị na-achọ soro. Na-enyere ezi chọta-ege gị ntị.
Site nlekota oru gara ibe weebụ, ị ga-achọta azịza nke ajụjụ n'elu. Ị nwere ike mgbe ahụ ikpebi ma nwa gị cell ekwentị kwesịrị nne na nna akara. Chọpụta ma gị na ndị ọrụ na-eji ụlọ ọrụ smartphones nanị maka azụmahịa nzube ma ọ bụ na-achọ ihe n'Intanet.
ExactSpy-Track Cell Phone Browsing History ana achi achi nchebe zuru ezu nke smartphone data. Ọ dịghị onye ma ị ga-enwe ohere gị n'onwe Gburugburu. E wezụga na, na ekwentị nlekota oru ngwa bụ kpam kpam undetectable. E nweghị icon ma ọ bụ ndị ọzọ na ụdị visual ngosi na ndepụta ngwa na-atụ aro nlekota omume. E nweghị ụzọ chọpụta na ọ na lekwasịrị ngwaọrụ.
N'ihi na gam akporo ngwaọrụ:
Ọ na-akwado wuru na-nchọgharị (Ọ na-adabere ntọgharị, Dị ka ihe atụ Chrome nchọgharị).
N'ihi na iOS Ngwaọrụ:
Ọ na-akwado Njem Ileta Ụmụ Anụmanụ na ihe nchọgharị na.
How do i view browsing history, How to check browsing history on cell phone, How to track cell phone internet history, Internet history tracking, Track Cell ekwentị Nchọgharị History, Track internet browsing history, Tracking internet activity
← Cell Phone Kparịtara teepu App